XUQUUQDA HAWEENKA IYO DOORKOODA- Qaybtii 2aad. | Where Education Talks
XUQUUQDA HAWEENKA IYO DOORKOODA- Qaybtii 2aad.	November 15, 2009
Filed under: Uncategorized — aqoonkaab @ 4:51 pm Qofnimada Gabadha
Diinta Islaamku waxay soo baxday iyadoo dadka qaar ay inkireen qofnimada gabadha, qaar ay ka shakiyeen, qaarna ay u aqoonsadeen inay ka mid tahay dadka, laakin ay hadana ku qeexeen inay tahay makhluuq loo abuuray u shaqaynta ninka. Waxyaabaha uu la yimid Islaamku waxay ahaayeen maamuusida haweenka, xaqiijinta qofnimadeeda, mudnaanshaha ay mudan tahay masuuliyad, abaal-marin iyo gelitaanka jannada hadii ay fuliso waajibaadkeeda. Islaamku wuxuu ku qeexay gabadha inay tahay qof maamuusan oo leh mid la mid ah xuquuqda uu leeyahay ninku.maadaama ay yihiin laba laamood oo geed kaliya ku yaal, ama laba walaal oo leh aabbo kaliya iyo hooyo kaliya, kuwaasoo ah Aadan iyo Xaawa.
Ragga iyo dumarku waxay ka siman yihiin waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin, asalka ay kasoo jeedaan, dabeecadaha guud ee Bani-Aadamka, waajibaadka, masuuliyadda, abaal-marinta iyo halkay ku danbaynayso cidhibtoodu. Ninka iyo gabadha, mid waliba sida uu u fuliyo masuuliyadda saaran ayuu abaal-marinteeda uga helayaa Ilaahay agtiisa iyadoo aan loo kala saarin jinsigooda, ee ay yihiin addoomo Ilaahay, sida ku cad Suuratul-Aal cimraan-195, iyo Suuratu Nisaa’-124.
Islaamku wuxuu waajib ka dhigay ragga iyo dumarka labaduba inay wax bartaan isla markaana raadsadaan aqoonta.
Dhinaca maaliyadda, Islaamku wuxuu buriyay fikrado badan oo ay qabeen dadkii waagaa noolaa, iyadoo gabadha loo diidanaa inay xoolo yeelato, iyo inay cid dhaxasho labadaba. Islaamku wuxuu u ogolaaday gabadha inay xoolo yeelan karto, isla markaana leedahay xaqa dardaaranka iyo dhaxalka. Gabadhu Islaamka dhexdiisa waxay heshay xaq ay wax ku iibin karto, iibsan karto, kirayn karto, hibayn karto,ergisan karto, ergisi karto, sadaqad la bixi karto iyo xaqa ay maalkeeda ku deeqi karto. Sidoo kale ayaa gabadhu u heshay xaq ay ku difaacdo maalkeeda sida ay u difaacayso nafteeda.
Sinnaanta guud kasokow, Islaamku ragga iyo dumarka wuu u kala gaar yeelay mid walba shaqadiisa, masuuliyadda saran iyo doorka uu ku leeyahay bulshada dhexdeeda, dumarku waa warshada soo saarta jiilal tayo leh oo la higsado, sidaa daraadeed, ayaa ragga loo dul-saaray ilaalinta, dhaqaalaynta iyo nafaqaynta xaaskiisa, ubadkiisa, gabdhaha ay walaalaha yihiin iyo waalidkiiba, iyadoo aanay dumarka intaa midna la wadaagin marka laga tago duruufo gaar ah oo aalaaba ay yar tahay intay dhacdaa, sida haddii la waayo ninka oo kale. Xikmada ka danbasa kala saarida ragga iyo dumarka xukunada qaarkood:
Su’aasha in badan la is- weydiiyo ayaa ah hadii uu Islaamku qiray inay gabadhu la siman tahay ninka, maxaa keenay in la doorbido ragga marar gooni ah iyo xaalado gaar ah. Sida markhaatiga, dhaxalka, magta, hawsha aqalka iyo maamulida dawladda?
Sida dhabta ah kala saarida labka iyo dhedigga ee xukunadani maaha in jinsiga raggu ka maamuus badan yahay-Ilaahay agtiisa- ka dumarka, waayo waxa Ilaahay loogu kala dhow yahay sida loo kala cibaado badan yahay, lab iyo dhedigba. Kala soocidan waxa sal u ah shaqada ay u kala gaar yihiin iyadoo la tix-raacayo sifada ay u abuuran yihiin.
Markhaatiga ninka iyo markhaatiga gabadha. Sida ku cad aayadaha u danbeeya Suuratul Baqara- Aayadda is-daymaynta- marka la kala qoranayo daynta arkaanta loo baahan yahay ee xusan waa, daymeeye, daymaysne, qo u kala qora (nootaayo), iyo laba markhaati oo caadiliin ah ragna ah.hadii la waayo rag, markhaatiga ninku wuxuu u dhigmayaa laba dumar ah markhaatiyadood si hadii a midkood ilowdo ay ta kale u xusuusiso. Tan macneheedu maaha daciifnimo dumar, iyo liidasho ay ka hooseeyaan qofnimadedu ka ragga, lakin waa iyadoo loo eegayo abuurkeeda iyo takhasuskeedashaqo. Sida aynu ogsoonahay, qof kastaa wuxuu awood weyn oo xusuuseed ku leeyahay goobaha iyo arrimaha uu inta badan ku dhex sugan yahay, waxaanu xasuustiisu ku yar tahay waxyaalaha aanu inta badan faraha kula jirin. Nidaamka ganacsiga iyo xidhiidhka maaliyadeed ee dadka ka dhexeeya maaha mid u dabacsan abuurka dumarka, dhex-galka hawshanina maaha mid inta badan loogu tala-galay dumarka, marka laga reebo marar yar oo ay duruufi sabab u tahay. Sida daraadeed, inta badan dumarku way kaga xusuus yar yihiin ragga waxyaabaha aanay inta badan la wadaagin ragga, sida ragguba ay uga xasuus yar yihiin dumarka dhinaca hawlaha guud ee guriga. Markaa waxa cad in xusuusta (memory) dumarku ay ka hoosayso ta ragga dhinaca ganacsiga iyo xidhiidhka maaliyadeed ee u dhexeeya bulshada, sida ay xusayso Aayadaasi iyadoo laga cabsi qabo inay illowdo waayo hawleheeda ayaa ka badan isla markaana aan wax xidhiidh ah la lahayn hawlahaa ganacsiga iyo is-daymaynta. Sida ay qabaan culimada qaarkood haddii arrinta dayntu uu dhex-marayo haween soo galay ganacsigan isla markaana in badan ku dhex-jira, waxa dhici karta in ay iyaga dhexdoodu markhaati isku noqdaan, laakiin taasina waa naadir iyo fara-ku-tiris.
Culimadu waxay isku raaceeen, in dumarka aan markhaati laga dhigan karin qisaasta iyo xuduudaha marka la fulinayo, iyadoo laga durkinayo gabadha inay dhex-gasho meelo xad-gudub, iyo fagaareyaal lagu galay dhagar iyo cadowtooyo. Tani waxa u sabab ah iyadoo aanay gabadha dabaeecadeedu marna u saamaxayn, waa marka hore e inay aragto intii loo baahnaa xad-gudubka dhacay, iyo ta labaad oo ah in xataa hadii ay dhacdo inay aragto aanay xaakinka ama qaadiga iyo umadda horteeda ka sheegi karayn wixii ay aragtay iyo sidii ay wax u dhacayeen. Tusaale ahaan, fulinta xadka sinada, way adag tahay in xataa ragga arkay laba ruux oo falkii samaynayaa ay buuxiyaan heerka looga baahan yahay inay markhaati ka noqdaan xadgudubkaa. Gabadhana inta badan marka ay la kulanto falalka foosha xun, waxa lagu yaqaan in ay indhaha qabsato oo qaylido iskagana cararto goobtaa ay wax ka dhaceen. Hadiiba ay dhacdo in ay si kadis ah ula kulanto falkana waxa ku adag cadayntiisa iyo sharaxiisa.
Waxa jira meelo u gaar ah dumarka sida dugsiyo, xarumo caafimaad, iyo gobo kaleba, kuwaasi oo ah meelo ka caaggan ragga. Hadii ay dhacdo in meelahaa u gaarka ah ay ka dhacdo danbi iyo xad-gudub, waxa xoogga la saarayaa markhaatigooda, maadaama aanay caqli-gal ahayn in markhaati rag shardi lagaga dhigo meel aan ragga waxba ka ogayn. la soco….
Comments Off on XUQUUQDA HAWEENKA IYO DOORKOODA- Qaybtii 2aad.